Aabaha Wasiir Abid Raja oo da´ah oo beeniyay eedeymo wiilkiisu uga yimid. - NorSom News
Aabaha Wasiir Abid Raja oo da´ah oo beeniyay eedeymo wiilkiisu uga yimid.
Wasiirka dhaqanka Norway Abid Raja oo katirsan xisbiga Venstre ayaa isbuucii tagay wareysi dheer oo noloshiisa ku saabsan siiyay wargeyska VG. Wuxuuna wasiir Raja ka waramayay dhaladiisii, koritaankiisii, qaabkii uu kusoo baxay, iyo sidii bulshadiisa Baakistaantu ay ula dhaqmeen. Qeybo kamid ah wareysiga, wuxuu wasiir Raja aad ugu eedeeyay waalidkiis, gaar ahaan aabihii oo uu sheegay inuu si aan wanaagsaneyn ula dhaqmay, kuna soo barbaariyay. Halkan ka akhri wareysiga Raja ee wargeyska VG.
VG ayaa la xiriiray aabaha dhalay Raja, Abdulqayum Raja si ay u siiyaan fursad uu uga jawaabo eedeemaha uu ka sheegtay wiilkiisa weynaaday ee hada wasiirka Norway ka ah. Balse Abdulqayum ayaa VG ka diiday inuu ka hadlo arrimaha uu Abid ka sheeganayo.
Taas badalkeeda wuxuu shaley wareysi dheer oo af Urdu ku baxay uu siiyay idaacada Voice of Oslo, wuxuuna aad ugu beeniyay eedeemaha dhan koritaanka iyo tarbiyeynta la xiriira ee wiilkiisa uga yimid.
Abdulqayum oo ah odey da´ah ayaa isaga oo wajigiisa laga dheehan karo murugo sheegay in isagu uu ahaa qofkii wiilkiisa Abid Raja u raadiyay inuu noqdo afhayeenka urur diimeedka Oslo Wold Islamic Mission oo ah ururka maamula masaajidka weyn ee Pakistanada Oslo(Masaajidka buluuga ah ee kan soomaalida u dhow). Halkaas oo aheyd meeshii uu kusoo caanbaxay, laguna bartay Abid Raja.
Wuxuu raaciyay inuu xiliyo kala duwan dhaqaale ahaan caawiyay wiilkiisa o, gaar ahaan markii uu aroosanayay iyo markii uu guriga gateyba. Isaga oo sheegay inuu kusoo koriyay nolol sabool ah oo adag, waalid ahaana uusan waxbo ka hagran wiilkiisa, waxyaabo badana uu u qabtay.
Halkan ka daawo muuqaalka wareysiga Aabaha dhalay wasiir Abid Raja
Previous articleQaaditaanka Imtixaanka luuqada ajaaniibta iyo qoxootiga oo dib loo furay
Next articleMadaxa shirkadan weyn: Guriga ayay shaqaalaha ka shaqeyn karaan.